Pabrika gilasy cube |China Ice cube tray Manufacturers, Suppliers
Toho-tantely silikôn-tantely kelikely lovia gilasy miaraka amin'ny tafo fitehirizam-bokatra
Food Grade Silicone:Lovia gilasy vita amin'ny silicone grade food, tazomy ho azo sotroina ny gilasy anao.Ireo gilasy ireo dia azo ampiasaina amin'ny sakafo ho an'ny olon-dehibe & zazakely, azo antoka ho an'ny fampiasana ao anaty vata fampangatsiahana, lafaoro, fanasana vilia, vata fampangatsiahana ary microwave.
Famoahana sy fanadiovana mora ny ranomandry:Ny akora silicone malefaka dia mamolavola tsara ny ambany, manamora ny famoahana gilasy.Ny tampon'ny silicone malefaka dia manamora ny fanadiovana.Toerana azo ampiasaina indray, tsy miraikitra, (Mamporisika ny hamoaka azy ao anaty vata fampangatsiahana ianao ary avelao mandritra ny 3-5 minitra eo ho eo. miandry ny ranomandry mitsonika kely rehefa avy nesorina tao anaty vata fampangatsiahana. ho mora kokoa.) Avy eo dia azonao atao ny manosika mora foana avy any ambany.
Amazon Top mivarotra lasitra vatomamy ravina gummy Silicone
Fampiasana samihafa:Ny lasitra gilasy DIY dia manana fampiasana maro, gilasy misy ranom-boankazo, jelly ho an'ny fety, snacks mangatsiaka, ary azo ampiasaina amin'ny fitehirizana sakafo sy voankazo ho an'ny ankizy.
Famoronana famoronana:Ny lasitra misy gilasy tsirairay dia misy tapa-kazo plastika fito.tsy azo ampiasaina ho fitahirizana sakafo ho an'ny zazakely, fa tonga lafatra amin'ny fanaovana popsicles ho an'ny ankizy amin'ny fahavaratra.
Famoronana famoronana: Ny lasitra misy gilasy tsirairay dia misy tapa-kazo fito plastika.tsy azo ampiasaina ho fitahirizana sakafo ho an'ny zazakely, fa tonga lafatra amin'ny fanaovana popsicles ho an'ny ankizy amin'ny fahavaratra.
Minnt, Pink, Sky BlueColor na loko mahazatra
-40 ~ 230 degre
Mora mipoitra sy manadio: Mora sasana ny bobongolo silicone malefaka sy tsy miraikitra, sasao fotsiny amin'ny rano mafana ary sasao amin'ny rano madio, ary misy ny fanasana vilia.
Ny vata fampangatsiahana azo antoka ho an-trano gilasy Pop bobongolo DIY manana sarony tapa-kazo Popsicle bobongolo sariitatra gilasy gilasy
Azo ampiasaina amin'ny lafaoro, vata fampangatsiahana, fanasana vilia ary microwave.Mahazaka hafanana manomboka amin'ny- 40 degre Fahrenheit ka hatramin'ny 446 degre Fahrenheit.Noho izany, ireo mpanamboatra gilasy ireo dia azo ampiasaina hanamaivanana goba sy hanendasany sakafo.
Mora manasa:Nonstick surface dia hamoaka sakafo tsy misy tolona.Aorian'ny fampiasana dia azonao atao ny manasa azy ireo amin'ny tanana na mametraka azy ao amin'ny fanasana vilia.Ny famolavolana push up dia mety hampihena ny mety hisian'ny fiparitahana ary ny endrika mahafatifaty dia hitondra fahafinaretana bebe kokoa ho an'ny fianakavianao.
24 Lova Whisky Lasitra Ice Cube Lasitra vata fampangatsiahana azo antoka Lasitra Silicone Ice Cube Lovia
Tray Ice Cube tonga lafatra ho an'ny whisky sy zava-pisotro hafa: mety tsara ho an'ny cocktails, punch, kafe gilasy, gilasy mamy ary maro hafa amin'ny fahavaratra.Ny lovia gilasy dia hanome anao toe-po mahafinaritra hanaovana gilasy.Hankafy ny traikefa fanaovana gilasy ianao.
Fanamboarana Ice Snacks DIY: manome anao traikefa fanaovana gilasy mahafinaritra kokoa ny lovia gilasy.Tonga lafatra amin'ny fanaovana gilasy na famenoana ny lovia misy zava-pisotro, voankazo, yaorta, jelly, sôkôla.
Custom 8 Lohataona Silicone Large Ice Cube Tray bobongolo miaraka amin'ny fonony Chocolate Silicone bobongolo
Sarony azo alaina sy azo esorina: Tonga miaraka amin'ny sarony azo esorina, mitazona ny ranomandry tsy hitroka fofona amin'ny vata fampangatsiahana.Ireo lovia mora avoaka ireo dia mivangongo mora sy milamina ao anaty vata fampangatsiahana tsy miraikitra.
COMPACT Design: ny haben'ny compact dia mamela ny fametrahana fitahirizana mitsitsy toerana mba hifanaraka tsara amin'ny vata fampangatsiahana an-trano, RV na vata fampangatsiahana mini.